ကလေးတွေ ပရိုဂရမ်ရေးကုန်ပြီ - MYSTERY ZILLION
February 2009 edited February 2010 in Tech News
ယာဟူးကထုတ်ပြန်တဲ့ သတင်းတစ်ခုမှာ ဖတ်လိုက်ရတာက ကိုးနှစ်သားအရွယ် ကလေးတစ်ယောက်က iPhone တွင်သုံးသော Application တစ်ခုကို ရေးလိုက်ပါသတဲ့၊ နှစ်ပါတ်အတွင်းမှာ ဒေါင်းလုဒ်ချတဲ့ အရေအတွက်ပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်သွားပါသတဲ့ကွယ်။
ကိုးနှစ်သားအရွယ် Lim Ding Wen ဆိုသော မလေးရှားနွယ်ဖွား စင်ကာပူသားလေးဟာ သူ့ညီမကလေး ကစားရန်အတွက် ပုံဆွဲ၍ရသော အနှီ ပရိုဂရမ်ကို ရေးပါသတဲ့လေ။ အသက်အရွယ်တူ ကလေးတွေ ရောင်စုံခဲတံလေးတွေဖြင့် ပုံဆွဲတန်းကစားသော အရွယ်တွင် ထိုချာတိတ်မှာ ပရိုဂရမ်တွေရေးရတာ စိတ်ဝင်စားနေပါပြီတဲ့။ ကွန်ပျူတာကို အသက် ၂ နှစ်အရွယ်တွင် စတင်သုံးတတ်ကာ ပရိုဂရမ်းကို စတင်စိတ်ဝင်စားတာကတော့ အသက် ၇ နှစ်မှာပါတဲ့။ ယခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ ပရိုဂရမ်ဘာသာစကား ၆ မျိုးလောက်ကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးတော့ ပရောဂျက်ပေါင်း အခု ၂၀ ကျော်လောက်ကို လုပ်ကိုင်ဘူးပြီးပါပြီတဲ့။ (ကလေးဂိမ်းတွေနေမှာပေါ့နော် :39:)
ခုနောက်ဆုံးရေးလိုက်တဲ့ ပရောဂျက်ကတော့ iPhone ပေါ်မှာ လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ပုံဆွဲလို့ရတဲ့
Doodle Kids လို့ခေါ်တဲ့ Application လေးတစ်ခုပါတဲ့။ ပုံတွေကို ဖျက်လိုက်ချင်ရင်တော့ iPhone လေးကို လှုပ်ခါလိုက်ရုံနဲ့ ပုံတွေ ရှင်းလင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါမယ်တဲ့။
မူရင်း ပရိုဂရမ်ကို ပထမဆုံးတော့ သူ၏ ကွန်ပျူတာထဲတွင် ပါစကယ် ဟုခေါ်တွင်သော ပရိုဂရမ်မင်း ဘာသာစကားဖြင့်ရေးသားတာဖြစ်ပြီးတော့ ခုနောက်ဆုံးမှာတော့ လူအများသုံးကြည့်နိုင်စေခြင်းအကျိုးငှာ iTunes Store မှာတင်ထားလိုက်တာဖြစ်ပါသတဲ့။ (သင့်ကွန်ပျူတာဟာ အင်တာနက်ကို ချိတ်ဆက်ထားပြီး စက်ထဲမှာလဲ iTunes ရှိမယ်ဆိုရင် လင့်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ ဂိမ်းကို အလကား ရနိုင်ပါပြီ။ Apple ID တော့ ရှိရမှာပေါ့နော်)
ကဲ ရေးကြပါဦးလား ကျုပ်ညီတော် တူတော်များတို့ရေ။
Hum !!! We, Myanmar Kids ................... ?????????:((
However !! Let's try for our generation !!!!
အခုတလော သူများတော်တာတွေပဲ တွေ့နေရတယ်။ မုဒိတာပွားရင်း စိတ်ဓာတ်ကျတယ်
အီမိုလေးရေ ... ကြိုးစားဟ ... အကိုတို့တော့ မပြေးနိုင်တော့ဘူး .. မောပြီ :d
အရမ်းတော်တဲ့သူတွေအကြောင်း ဒီမှာရေးရင် .... MZ Friends တွေက စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ပဲအော်နေတော့တာပဲ ...
ဒီတော့ .... Alexander က စိတ်ဓာတ်မကျဘူးလားဆိုတော့ .... .... ကျတာပေါ့လို့ ....
ဒါပေမဲ့ ... ပုံမှန်ကြိုးစားသွားရင် ဖြစ်လာမှာပါ ........ အဲလိုပဲထင်တာပဲ
MZ က Friends တွေကလဲတော်တာပဲကို .... တချို.ဆို Alexander ထက် ငါးနှစ် လောက်ငယ်ပေမဲ့ ငါးနှစ် စာလောက်တောင်ပို တော်နေကြတာ ....... :30:
စိတ်ဓာတ်တွေသိပ်မကျ ကြပါနဲ့ ကွယ်တို့ ... Alexander ကျဖို့ချန်ထားပေးကြပါလို့ ....
ဒါပဲလေ၊ အခုခေတ်မှ ပညာရေးရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကပြောင်းလည်းသွားပြီ။ နောက်ပေါက်တွေ ပိုတော်ရမယ်ဆိုတဲ့ ပေါ်လစီလေ။ ဆရာစားကွက်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ ဆရာထက်ပိုတော်ရမယ် ပဲရှိတယ်။ ဒါကြောင့် Thesis တွေ၊ သုသေသန စာတမ်းတွေရေးတဲ့ စနစ်ထွန်းကားလာတာပေါ့။ အရင်လူအားထုတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ လိုက်နင်းပြီး ပိုကောင်းအောင် လုပ်နေကြတဲ့ခေတ်လေ။
India တောင် ၂၀၂၀ စီမံကိန်းပေါ်လှုပ်ရှားနေတယ်။ အဲဒီအချိန်ကြရင် သူတို့က တစ်ကမ္ဘာလုံးကို နည်းပညာရှင် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ရမယ်တဲ့ဗျာ။ ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်လဲ။
မြန်မာလေးတွေလဲ လုပ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ အီမိုလေးကို သင်ပေးလိုက်ရင် ဒီလောက်ကတော့ တစ်ပတ်အတွင်းရမှာပါ။ ဒါက ဟဲဗီး ပရိုဂရမ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ ရယ်ဒီမိတ် library လေးတွေကို ယူသုံးသွားတာပဲဖြစ်မှာပါဗျာ...။ မြန်မာတွေ စိတ်ဓာတ်မကျကြပါနဲ့။ ရှိသလောက်ပစ္စည်း ရသလောက်မီး၊ သွားသလောက် ကွန်နက်ရှင်နဲ့ သူတို့ထက်သာအောင်လုပ်နေကြတာတွေအများကြီးပါ။
iphone ၀ယ်ပေး....ရေးပေးမယ်။ :d
နာ့လဲ တစ်လုံး၀ယ်ပေးရင်.... ရေးပေးဦးမှာ .....
ဟီးဟီး ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ချ်နဲ့ ရသွားတာနဲ့ လွဲကုန်ပြီလားမသိဘူး။ ညီတော် တူတော် မြေးတော်များ စိတ်ဓါတ်မကျကြပါနဲ့ စိတ်ဓါတ်တက်သွားအောင် ကလေးတွေတောင် ရေးကုန်ပြီ ဒို့များလဲ စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်ဆိုပြီး ပြောချင်တာပါခင်ဗျ။ :d
အနာဂါတ်ကို မြေးတို့လက်ထဲ ထည့်လိုက်ပြီ။ အဘတို့တော့ အနားယူတော့မယ်။ မရေးတော့ဘူး :P
တားတားလဲ စိတ်ဓာတ်တက်သွားပြီ။ ပြန်တောင်မကျတော့ဘူး... ရေးမယ် ... ရေးမယ်... အိုင်ဖုန်း ...၀ယ်ပေး... ခု၀ယ်ပေး....:d:d:d:d
သားသားတောင် နိုကီယာ အစုတ်ကလေးနဲ့ပါဗျာ ... မရှိမရှားလေးပါ။ :106: :2:
သူ့ပါးပါးကလဲ ဂျွတ်ကြီးပဲကို ဘဘရဲ့..
သားတို့က iPhone SDK ရှိပေမယ့် Mac ကလေးမရှိလို့ စိတ်ထိန်းထားရတာပါ...
(တော်သေးပါရဲ့.. ဒါလေးပြောစရာရှိလို့.. ) :68:
အဟင်း တားတား နော် သားသားစကားကို ခိုးချတယ်...
:5::5::5:ကလေးလောက်တောင် မတက်လို့ စိတ် ဓာတ်ကျပါ တယ်....ဟီး...:((:((:((ဘယ်သူမှသင်မပေးချင်ဘူးလားဗျ...။ အခြား iphone နဲ့ပက်သက်တဲ့ appli.. လေးတွေရှိရင်တင်ပေးကြပါဦး...အသုံးလိုလို့ပါနော်...:77::77::77:ကျွန်တော်က ဖုန်းဆော့၀ဲလ်သွင်းးပေးတဲ့အလုပ် လုပ်ချင်လို့ပါ...Threads ရေးပြီး အကူအညီလည်းတောင်းထားပါတယ် .....:77::77::77:
အဲ့တာကြောင့်နဲ့ တူတယ်။ ဆရာအောင်သင်းက ပြောတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းရှိတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ လူရွှင်တော်တွေ ပြောတာ ကြားဖူးတယ်။ တက်ရောက်လာတဲ့လူတွေထဲက လူကြီးတွေကို ဖယ်ပြီး လူငယ်တွေကို ကန်တော့ပါတယ်တဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူကြီးတွေက ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ မှန်းလို့ရပြီး လူငယ်တွေက ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ မှန်းလို့မရလို့ပါတဲ့။
ဒါကြောင့်နဲ့ တူတယ်နော်။ :d :d :d
မောင်လေးကလဲ ... မမတွေနဲ့ပဲနေ... လူကြီးတွေကြားထဲ ပါ ပါ မလာနဲ့.... ဟီး:d:d:d:d:d
အဟား .. ချက်ကောင်းကို တစ်ချက်ထည်းထိသွားမှာဘဲ .. ညီညီရေ အားလုံးလဲ သိကုန်ကြပါပြီကွယ် :65:
BlackDevil wrote: »
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော် တို့လည်း တော်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့ဗျ လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာ တော့မရှိပါဘူးဗျ ကျွန်တော်တို့တွေမလုပ်သေးတာပဲရှိတာ ကြိုးစားရင်တော့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျာ
ကျွန်တော်ဒီ POST လေးကို ဖတ်ရင်း အတွေးပေါ်လာလို့ ချရေးလိုက်မိပါတယ်။ ဒီလောက်အသက်မှာ ဒီလိုရေးနိုင်တာ လေးစားပါတယ်။ ကျွန်တော်သူအသက်တုန်းက ကွန်ပြူတာ ဆိုတာ ကားတွန်း ရုပ်ပြထဲမှာ ပဲတွေ့ဘူးပါတယ်။ ခုသူဒီလိုရေးနိုင်တာ သူ့အဖေရဲ့ ထောက်ပံမူတွေ အများကြီး ပါမှာ သေချာပါတယ်။ ဒါကတော့ သူအဖေ info: လေးပါ။
Lim's father - Lim Thye Chean -achief technology officer atalocal hi-tech firm, who also writes iPhone applications, was modest about his son's achievements.
ဒီကလေးလေးဟာ 2nd generation ပါ။ 1st generation ကကောင်းခဲ့တော့ မျိုးစေ့ ချပေးနိုင်တာပေါ့။ ခုချိန်မှာ MZ က ညီအစ်ကိုတွေရော၊ မြန်မာ IT လူငယ်အများဆုဟာ 1st generation တွေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်လမ်း ကိုယ်ရှာပြီး guide လုပ်ပေးမယ့်သူ မရှိပဲ လျှောက်နေကြရတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ မညံပါဘူး ဆိုတာ သူတို့နဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်ဘူးတဲ့ သူ တွေသိပါတယ်။ သူတို့က ငယ်ငယ်လေးထဲက computer & inet & electricity ဆိုတာတွေက ပြည့်စုံနေတာပါ။ ဒါကြောင့် တစ်ချို့ နေရာတွေမှာ သူတို့ ကျွန်တော်တို့ထက်ပိုပြီး သိနေတာပါ။ IQ အရမ်းမြင့်နေလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တုန်းက အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပြန်ပြော ပြချင်ပါတယ်။ ၁၀ တုန်းက ကျောင်းမှာထားတဲ့ ကွန်ပြူတာ ဆိုတာ မြင်ဘူးအောင် ပြတင်းပေါက် ကနေချောင်းခဲ့ ရတာပါ။ တခါ လူကြီးလာလို့ ကွန်ပြူတာခန်းကြီး ဖွင့်ထားတုန်း ဝင်ကြည့်တာ ကွန်ပြူတာက screen saver တတ်နေတာ mouse ကိုလက်နဲ့ တိုက်မိတာ screen saver ကြီးက ပျောက်သွားရော။ ကျွန်တော်ထင်တာက ကွန်ပြူတာကြီး ပျက်သွားပြီ လို့ထင်တာ။ ကြောက်ပြီး နေမကောင်းဘူး ဆိုပြီး အိမ်ပြန်ပြေးတာ မှတ်မိ နေသေးတယ်။:O
MZ ကညီအစ်ကိုတွေ သူတို့ လုပ်နိုင်တာကို မုဒီတာပွါးရင် ကျွန်တော်တို့ generation တွေအတွတ် ကြိုးစားကြတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ 1st generation အချင်းချင်းလည်း သိထားတာတွေပိုပြီး share ကြတာပေါ့ဗျာ။
သေချာတယ် "If they can do, We also can do" ပါ။:6:
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ မညံတာ သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှ ဘယ်နိုင်ငံ ကနေပြီး UN အတွင်းရေးမူး နေရာကို ရခဲ့ဘူးလဲ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးထဲက ဦးသန့် ရခဲ့ ဘူးတယ်။ လီကွမ်ယု ကို အနောက်တိုင်းကလေးစား သလို ဗိုလ်ချုပ် အောင်းဆန်း ဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးထဲမှာ ရှိပါတယ်။ \_:D/
ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message ကတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေလဲ လုပ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ generation တွေအတွတ် ကျွန်တော်တို့ တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆုံး
ကြိုးစားကြမယ်ဗျာ။ ကိုကြီးတီပြောတဲ့ ဒီစကားလေးကို ယုံပါတယ်ဗျာ။:67:
ရှိသလောက်ပစ္စည်း ရသလောက်မီး၊ သွားသလောက် ကွန်နက်ရှင်နဲ့ သူတို့ထက်သာအောင်လုပ်နေကြတာတွေအများကြီးပါ
ဒီလိုတွေဖြစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ကောင်းမွန်ပြီး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ထောက်ပံမူတွေ အများကြီးလိုပါတယ်
ကျွန်တော်တို့မြန်မာကလေးတွေ မတော်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး တော်ကြပါတယ် ဟိုတလောက ilbc က လုပ်သွားတဲ့ ပြပွဲကိုပဲကြည့် ထွင်သွားတဲ့ဟာတွေက အလန်းတွေကြီးပဲ မြင်တောင်မမြင်ဖူးဘူး
ဒါကြောင့် ကျိုးစားမှုသာမက ကောင်းမွန်ပြီး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ထောက်ပံမှုလည်း ရှိခဲ့ရင် ဘန်းကျော်က တစ်နေ့ကျရင် အမေရိကန်ထက်တာလာမှာပါ:67:
(ဒါတောင်ကျွန်တော့်အဖေက သိပ္ပံပညာရှင်မဟုတ်လို့ ဟုတ်ခဲ့လို့ကတော့ အခုဆိုရင် ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်း:39:)
အဲဒီမေးခွန်းက ကျုပ်တို့ အဘိုးတွေလဲ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ခြောက်ဆယ် လွတ်လပ်ရေး ရပြီးခါစ တုန်းကလဲ မေးခဲ့တယ်။ အခုလည်း ထပ်မေးအုန်းမှာလားဟင်။
အခုက အဖြေပေးရတော့မယ် အချိန်လေ။ ထပ်မေးနဲ့တော့။
အဲဒီမျိုးသတင်းလေးတွေရလို့ တင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါဘဲ..လိုက်မရှာရတော့ဘူးပေါ့..ကျွန်တော်လည်း ပရိုဂရမ်ဆွဲနေပါတယ်..အသုံးချလို့တော့ ရျမှာဟုတ်ဘူး..နောက်ဘ၀ ၁ နှစ်သား ပြန်ဖြစ်မှ အားလုံးကို ပြတော့မယ်နော်...:d :d :d
ကျွန်တော်တို့တစ်တွေရဲ့ အိုင်တီအကိုကြီးတွေက စိတ်ဓါတ်ကျတယ်လို့ ညီးခန်းဖွင့်နေတော့ နောက်တက်လာမယ့် လူငယ်လေးတွေကလည်း စိတ်ဓါတ်ကျကုန်မှာပေါ့။ မကျကြနဲ့တော့နော် ။ ၀ုိင်း၀န်းပြီးတော့မှ မြှင့်တင်ကြရအောင်. . . စိတ် စိတ် စိတ်
Yes,my brother, you are sure.ရှိသလောက်ပစ္စည်း ရသလောက်မီး၊ သွားသလောက် ကွန်နက်ရှင်နဲ့ သူတို့ထက်သာအောင်လုပ်နေကြတာတွေအများကြီးပါ။
:)Yes,my brother,you are sure. ရှိသလောက်ပစ္စည်း ရသလောက်မီး၊ သွားသလောက် ကွန်နက်ရှင်နဲ့ သူတို့ထက်သာအောင်လုပ်နေကြတာတွေအများကြီးပါ။:)
အော်.. သူကဒီလိုရား.:o:o. သားက အသက်နဲနဲကြီးသွားရို့နော်.. ဟီး ဟီး .. စတာနော်အကို ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. အခုလိုမျှဝေပေးတာ..:67:
Agree with you, uncle tweety. Don't feel depress beingaburmese. We've to try our best and can even get No.1 in IT.
Originally Posted by MrDBA
[FONT="]အော်[/FONT].... [FONT="]သူများကလေးတွေတော်ပါတယ်[/FONT].. :77:
[FONT="]မြန်မာနိုင်ငံက[/FONT] [FONT="]ခုမှ[/FONT] Developing [FONT="]နိုင်ငံလေ[/FONT].. ..
[FONT="]ဒါပေမဲ့[/FONT].. [FONT="]ခုဆိုရင်[/FONT] [FONT="]မြန်မာနိုင်ငံရဲ့[/FONT] [FONT="]မျိုးဆက်သစ်လေးတွေဆိုရင်လည်း[/FONT].. [FONT="]နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာ[/FONT].[FONT="]ကွန်ပျူတာ[/FONT] [FONT="]သင်တန်းတွေ[/FONT] [FONT="]တက်နေကြတာပဲ[/FONT]..
[FONT="]တစ်ချိန်ကျရင်တော့[/FONT].. [FONT="]မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း[/FONT]. .. [FONT="]သူတို့လိုပဲ[/FONT] [FONT="]ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့[/FONT] .. [FONT="]ထက်မြတ်တဲ့[/FONT].. [FONT="]အိုင်တီပညာရှင်လေးတွေ[/FONT] [FONT="]ပေါ်ပေါက်လာမှာပါ[/FONT]... :41::41::103::103:
ထောက်ခံပါတယ်ဗျာ........သောက်သောက်လဲကိုထောက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့်..အနော်လဲကိုယ်တိုင်က လုပ်နေရတုန်းမို့ ဘာမှကိုလုပ်ရသေးဘူး.........:d
မော်တာပါးစပ် wrote: »
ဒီဟာလေးကို ခုမှဖတ်ဖြစ်တာပါ။ ပြီးနည်းနည်းလေး ပြောချင်တာလေးပေါ်လာတယ်ဗျာ။ စစ်မှန်တဲ့ ပညာရေးဟာ ကျောင်းရဲ့ အပြင်မှာ ၊သင်တန်းအပြင်မှာရှိတာပါ။ အကိုတို.လည်း သိပါတယ်။ကျနော်တို့ ဆီမှာ သင်တန်းတက်တာ ၊ computer ဆိုတာ fashion လိုဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ တကယ်လုပ်တဲ့ လူက ရှားတယ်။ အဲ့ဒါက ခက်တာ ။ဒီ သင်တန်းတက် ၊ ဒါကိုသိရင် ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရလဲ ၊ ဘယ်နိုင်ငံမှာလုပ်လို. ရလဲ ဒါတွေပဲဖြစ်နေတယ်။ ဆရာ၀န်က စာရင်းကိုင်သင်းတန်းတက် ၊ network engineer က AutoCad တက် ပိုက်ဆံနောက် ပဲ သိပ်လိုက်လွန်းနေတော့ နည်းပညာက ကျဆုံးကုန်ရော။ Academic စစ်စစ် ဖြစ်ဖို. မပြောလိုပေမယ့် ကိုယ့်ပညာလေး ၊ ကိုယ့်၀ါသနာလေးကို ပိုက်ဆံနဲ့ လုံးလုံးမလဲ ကြပါနဲ့ဗျာ။ အဲလိုဆိုရင်တော့ နောင်မကြာခင်ကာလမှာ အကုန်ညီမျှသွားမှာပါ။
ကျွန်တော်လည်း အခုမှဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါတယ် တော်ကြပါတယ်၊အားလည်းကျမိပါတယ်။
အလုပ်လုပ်ဖို့ထမင်းစားရတဲ့အချိန်မျိုးရောက်လာရင်တော့ များမကြာမှီအချိန်မျိုးမှာ ရောက်လာ
ပစ္စုပ္ပန်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ရင်၊ နောက်များမကြာမှီမှာ
အတိတ်ရော၊ အနာဂတ်ရော၊ ပစ္စုပ္ပန်ရော အားလုံးကောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်၊
ဟုတ်ပါတယ် အီမိုလေးဆိုတာဘားကန် ့တတ်တဲ ့အီမိုလေးမလားသူ ့လဲကွန်ပျူတာကျွမ်းပါတယ်
ဂိမ်းမင်းဘက်များနေလို ့ပါ တကယ်တော့မြန်မာတွေလဲတော်တာပါပဲ
ကျွန်တော်က အသက် ၁၀နှစ်မှ ကွန်ပျူတာနဲ့ရင်းနှီးတယ်။ အသက် ၁၆ နှစ်မှာမှ programming ကို သိတာ။
ဒီလို သတင်းမျိုးက ကွန်ပျူတာဆက်သင်ချင်စိတ်နဲ့တောင် ပျောက်တယ်။
ကျောင်းတွေမှာလဲ ကွန်ပျူတာတွေ ကြွက်ကိုက်ကုန်ပြီ။ အခန်းထဲထား အလှကြည့်နေသမျှတော့................................
နောက်ပြီး GTC လို နေရာမျိုးမှာ ကွန်ပျူတာ သမားတွေ တအား အထင်သေးခံရတယ်။
ကွန်ပျူတာ မရှိလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုးတွေ ရှိနေသ၍ မြန်မာပြည်က ဘယ်တော့မှ နည်းပညာတိုးတက်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်တယ်။
(((ဆောရီးဗျာ........စိတ်ညစ်ပြီး ဒေါသထွက်လို့ရေးလိုက်တာ အမှားပါရင် အနူးအညွှတ်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။)))
iPhone application မပြောနဲ့အုံး.. ကျောင်းက project Snake and Ladder java program လေးကိုတောင် ဖင်ပြဲအောင်ရေးနေရတယ်... စိတ်လေပါတယ်ဗျာ.. ပြောတာရိုင်းသွားရင် စောရီး...
အဲ့လို​​ပြောတော့ ကျွန်တော်တို့က လျှပ်စစ်မီးကို အခုပုံမှန်မရနေတာမှ မဟုတ်တာပဲ။ M.O.E.P (2) က လျှပ်စစ်ကို ပြည်သူတွေကိုရောင်းတာပါ။ များများရောင်းရလေ ပိုက်ဆံများများရလေပါပဲ။ မတတ်နိုင်လို့သာ အလှည့်ကျ မီးပေးတဲ့စနစ်ကို ကျင့်သုံးရတာပါ။
Lim Ding Wen ကိုၾကည့္ျပီးအားသိပ္မက်ေသးဘူးကို zack ေျပာမွပဲအားက်သြားတယ္.....we are first generation.